Ukuguqula nokuRisayikilisha kwiincwadi ezindala nguCecilia Levy | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukuguqula iincwadi ezindala zibe ziikomityi zephepha kunye neepleyiti
Kukho amaxesha amaninzi amaxesha esiwafumanayo imisebenzi yobugcisa ethile esothusayo kukusuka kwabo kunye nobuchule bokuyila. Ngephepha sinemathiriyeli ebingumntu ophambili kumangeniso amaninzi, phakathi kwawo esinokuthi sihlangule esi sixeko senziwe ngendlela emangalisayo kwaye ethe yabizwa ngokuba yiPepholholm.
UCecilia Levy lelinye lamagcisa awafumeneyo iphepha njengezinto ezizodwa, nangaphezulu leyo ikwiincwadi ezindala kwaye iphinde yaphinda yasetyenziselwa ukusizisela imifanekiso eqingqiweyo ngendlela ekhethekileyo. Lo mculi waseSweden uguqula ezo ncwadi zindala kunye neekomikhi zibe yimisebenzi emihle enephepha.
Umrhumo ngoku unomdla omkhulu ezandleni zakhe xa ukhangela eyona milo intle kula magqabi ivela kwezo ncwadi zindala. Amanye amaphepha aprintwe nge-inki ahambisa izitya ezintle kakhulu, iipleyiti okanye iikomityi kunye nokubheja kwasekuqaleni.
Ubungqina kwezo ncwadi zakudala bebeza kuphelela enkunkumeni, Kwaye kwafunyanwa enye indawo ekuyiwa kuyo ukuze babe yinxalenye yomsebenzi omkhulu wobugcisa. Umrhumo uqale ukuvavanya olu hlobo lomsebenzi wephepha le-3D ngo-2009. Ukusukela ngaloo nyaka ubesenza izinto ezahlukeneyo, kubandakanya iipleyiti, iikomityi okanye izitya.
Ihlala ikwi khangela iincwadi ezintsha ezindala ukubanika enye ifom kwaye ibe yinto yokuhonjiswa komntu okhetha ukufunda iincwadi eziprintiweyo kwezo zedijithali ezinjengezo zombane.
Unayo iwebhusayithi yakho apho unokufumana khona imisebenzi emininzi enje ngeebhutsi, ii-acorn okanye ezo zinto ziphinda zenziwe ngokutsha kuzo zonke iintlobo neemilo. Omnye umzobi wephepha ophetheyo ukuphinda asebenzise iincwadi ezindala kunye neekomikhi zibuyisele kuthi ngendlela enomdla kakhulu kwaye ngokukodwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Ukuguqula iincwadi ezindala zibe ziikomityi zephepha kunye neepleyiti
Izidalwa ezincinci eziDlamkileyo zikaKasia noJacek Anyszkiewicz